Mai Chibwe VekwaZimuto: Tsika yokumwira mukadzi Mushonga
Ndatumigwa mwadhi dzasvika nhatu nevakadzi vane varume vane tsika yokuti nguva nenguva anomwa mushonga wekumisa chombo kwenguva refu, ipapo asina kuudza mukadzi kuti ndizvo zvaaita. Zvadaro oda kuti mukadzi avate akasvinura achimuvhurira makumbo kuzvika azoneta zvokuti vese vavate hope.
Kusvika pakunyora mwadhi yakadai mukadzi achikomburena, zvinoreva kuti pane chamugumbura pazviri. Chii chingagumbura mukadzi ane murume anoda kuvata naye nguva refu? Ko tese wani tinoda murume anodaro mazuva ese . Saka chaipa chii? Chaipa ndechokuti murume angozvifungira ega kuti nhasi anoda kumwira mukadzi mushonga. Mafungire ake ndeekuti mukadzi haanei nokuudzwa kuti nhasi gadzirira tigombotamba nguva refu. Murume uyu munhu asingahwisisi kuti kuvatana ndekwevanhu vaviri saka vanofanira kuronga vese.
Hapana chakaipa kufungawo kuti shuwa dai ndagarotora nguva pakuvatana nomukadzi wangu. Hapana chakaipa kuzama kuzvigadzirisa. Asi kana wafunga kumwira mukadzi mushonga zviri nani umuudze kuti uri kumurongera nyaya nyaya , kuti afane kugadzirirawo kunakigwa nazvo. Kuvatana ndekwevanhu vaviri saka kana pane mushonga waunoda kumwa taurira umwe wako.
Nyaya dzemishonga idzi inyaya dzinokuvadza muviri. Mishonga mizhinji yakawanda ine zvainoita zvisina kukwanirana nomuviri. Kuti chombo chimire BLOOD pressure inokwanisa kubva payange iri igokwira, zvinoreva kuti murume anokwanisa kuita HEART ATTACK. Kuziva kuti murume wako amwa mushonga wakadai ega asina kukuudza chinhu chinotyisa. Hazvinei kuti azokurhoja zvinogutsa.
Kana wada kumwira mukadzi mushonga, tsvaka mushonga unozikamwa mashandire awo wakaita se VIAGRA. Zvadaro tanga waenda kwa Doctor wonotariswa kuti une utano hwakakwana here kukwanisa kushandisa mushonga uyu. Hazviiti kuti Doctor akupe mushonga wakadai pasina chikonzero chaunodira kuushandisa. Saka zvotoreva kuti unofanira kureva nhema pazviri kuti chombo hachisi kumira. Zvadaro achakuongorora kwenguva ozokuudza kuti anokwanisa here kukupa mushonga kana kwete. Kana uri wezera rechidiki kazhinji haupiwi mushonga. Murapi anokuudza kuti unofanira kumirira kusvika chombo chega zvacho chafunga zvokutangazve kumira.
Kana akakuudza kuti haasi kuda kukupa mushonga okuti muviri wako une RISK yekukuvara pazviri, iwe chirega kuenda negweseri wondomwa mushonga wega. Unokwanisa kufa nazvo. Kana akakupa mushonga usangotanga nokumwa mamwire aakuudza. Tanga nomushoma kuti uone zvinoitika. Asi udza mukadzi wako kuti ndizvo zvawaita kuti kana pakaitika chakaipa azive chikonzero uye zvokuita.
Mishonga yedu yechivanhu inonetsa kuihwisisa nokuti kazhinji inoita zvinodiwa kuti iite asi hapana anoziva kuti mugwere anofanira kumwa mushonga wakawanda zvakadii. Zvinoitika kuti unokwanisa kumwa mushonga wakawandisa (overdose)
Hwisisazve kuti kana watanga tsika yokumwa mushonga wekumisa chombo, panosvika nguva inoti unozotadza kumira chombo pasina mushonga. Uchaona kuti pakupera kwenguva unotanga kuwedzera mushonga iya kusvika wapfuura paunofanira. Saka funga kuti kana zvazodaro uchashandisei.
Kana uri munhu wechidiki, chokwadi ndechokuti haufaniri kufunga nezvokushandisa mushonga pakumisa chombo. Chombo chega chinongomira kakawanda pazuva kana une utano hwakakwana. Kana uvete chinomira zvinopfuura ka gumi. Kwaedza chinomira kupfuura kagumi nechanu. Chauri kuzomwira mushonga chii? Kana mukadzi wako asingaguti. Wana mukana wekushandisa maoko ako pakumukwizirira bhinzi yake nepamberi kusvika anatsozara zemo iwe wozomupinza chombo iye okasira kuguta iwe wosara uchitevera.
Kana wava munhu ati kurei, toti makore anopfuura makumi mana, zvinokwanisika kuti chombo chinomboita nguva yachinoramba kunatsoti GWAA kuoma pakumira. Tsvaka chikonzero kwete kungoda kumhanyira kundomwa mushonga wekuwedzera kumira. Unokwanisa kufa nazvo.
Kana murume wako akumwira mushonga ukavata wakasvinura nazvo uchiita zvokuchinjanisa maitire usiku hwese, mirira kusvika kwaedza ugogarisa murume wako pasi umutsanangurire kuti hazviiti kuti angoerekana amira chombo usiku hwese saka ngaakuudze kuti zvakabva kupi. Kana azokuudza, mutsanangurire kuti kushandisa mishonga yakadai kunokwanisa kumukuvadza saka zviri nani kuti kana achida kuwedzera zvokuita musi waada zviri nani kuti titaurirane tibatsirane kufunga zvokuita musi wacho.
Mishonga ndiyo hayo. Mukadzi wese anofarira murume anomufunga uye kumurongera zvemanheru asi mishonga dai tashandisa takachenjera. Kana tabvumirana kumwirana mushonga ngatibvumirane asi zvokungoerekana mushonga wamwiwa bodo. Mumba ngamuite RISK paupenyu inozikamwa nevese vakuru vemhuri, murume nomukadzi.
Mkadzi anoisira murume mushonga
Koitawo vamwe vakadzi vanoti akaita vhiki yese murume achiramwa kumuisa, pamwe zvabva pakupopotedza, pamwe iri ngari yokuti haachamudi, kana kuti anongoti akaneta, mukadzi woisira murume mushonga wekumisa chombo kuti murume ashushikane pakunovata. Izvi handizvo nokuti unokwanisa kuuraya murume wako. Zvadaro pa POST MORTEM paya kana muri kunyika dzinoita POST MORTEM, zvinobatwa kuti murume ange amwa mushonga. Unokwanisa kusungwa nazvo.
Asi kune vakadzi vakawanda vanozviita kuitira kuti murume ade kumuisa. Zviri nani kugara pasi nomurume wako womuudza kuti dai awedzerawo basa mumba nokuti hausi kuguta. Asi kana wave kudaro wana mataurire okuti murume ahwisise kuti chauri kudira kuti awedzere ndechokuti pakuisana anokunakira saka unoda zviwande. Murume akafungira kuti hausi kuguta pakuisana kwenyu anokwanisa kushaya CONFIDENCE pakuisana opedzisira atoderedza.
Usaisira murume mushonga wekumisa chombo asingazivi. Zvikuru VIAGRA nokuti inoitisa HEART ATTACK kana ane HIGH BLOOD PRESSURE.
Asi iwewo ukajaira kugarobata chombo chomurume uchichipurudzera chichijairawo kubatwabatwa uchaona kuti anowedzera kukunonokera uye chinowedzera nguva yokugara chakamira, iwe wowedzerawo kunakigwa.
Uyezve kugarovhurira murume kunoita asakasira kutunda nokuti anenge asina nguva yakareba asina kumbovata newe. Anononoka monakigwa mese. Vakadzi vemudzimba tinowanzisa tsika yokuita unyope pakuvhurira varume vedu. Murume akavata asina chaaita anotombomira chombo chete avete hope kureva kuti aifanira kunge ambotapudza urume. Tapudza urume hwemurume wako agare akadzikama hana. Newewo uchaona kuti unodzikama kana uchipiwa zvokuita mumba kakawanda paviki.vemishonga izvo dai wamosiyana nazvo.
Udzai Vamwe !!!